I-25 YENTLOKO YOMFAZI OMNCINCI WEENWELE ZENWELE (2021 ISIKHOKELO) - IINWELE ZAMADODA
I-25 yeNtloko yoMhlolokazi yeNtloko yeenwele zamadoda
Eyona Iinwele Zamadoda I-25 yeNtloko yoMhlolokazi yeNtloko yeenwele zamadoda
Incopho yomhlolokazi inokuba nobuqili okanye inzulu, kodwa iinwele zakho ezimile okwe-v zisenokubonakala zilungile ngeendlela ezininzi zokulungisa iinwele. Ngelixa uninzi lwamadoda lunencopho yomhlolokazi ngenxa yemfuza,…
Incopho yomhlolokazi inokuba nobuqili okanye inzulu, kodwa iinwele zakho ezimile okwe-v zisenokubonakala zilungile ngeendlela ezininzi zokulungisa iinwele. Ngelixa uninzi lwamadoda lunencopho yomhlolokazi ngenxa yemfuza, amanye avelisa ukubuyela kwincopho yomhlolokazi ngokucheba kunye nokulahleka kweenwele. Nokuba uyayithanda incopho yomhlolokazi wakho okanye akunjalo, abafana kufuneka bafumane indlela yokuyisebenza kwi-hairstyle okanye bayifihle. Ngethamsanqa, zininzi iinwele zamadoda ezibukeka zinesitayile kunye nenqanaba lomhlolokazi. Ukusuka kwizinwele ezimfutshane njengokucheba kwe-buzz kunye ne-crew cut to styles longer like the comb over and slick back, amadoda aneencopho zomhlolokazi angakhetha kuzo zonke iinwele ezithandwa kakhulu. Ukuba ufuna ugqozi kunye nemibono, jonga uluhlu lwethu lweyona ndawo iphambili yomhlolokazi wokulungisa iinwele ukuze ufumane ngoku!
1Yintoni Incopho Yomhlolokazi?
MbiniUkuhlaziya iinwele vs Incopho yomhlolokazi
3Uyilungisa njani incopho yomhlolokazi
4Eyona ndlela iphambili yomhlolokazi weeNwele
4.6Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
4.7Icandelo lokucheba iinxalenye
4.8Uhlobo olufutshane lwe-Spiky Hairstyle
4.14Indlela emfutshane yokuPhambili
4.17Hlanganisa kwakhona neendevu
5Incopho yeNwele yomhlolokazi
Yintoni Incopho Yomhlolokazi?
Incopho yomhlolokazi luhlobo lweenwele ezibonakaliswe yimilo ye-v. Rhoqo, iinwele zencopho yomhlolokazi ziyehla ukusuka kumbindi webunzi ukuya emacaleni. Ngelixa incopho yomhlolokazi iyi-genetic, ijongeka ifana nokwehla kweenwele okubangelwa kukulahleka kweenwele okanye impandla yamadoda. Amanye amadoda anencopho yomhlolokazi onzulu, ngelixa amanye enesincinci okanye esinzulu esingabuyeli mva kakhulu.
Kwiimeko ezilula, abafana bacela nje ukuba abachebi iinwele zabo ukuba bachebe indawo evelayo yencopho okanye i-V. Kwiimeko ezigqithileyo, kufuneka ufumane iinwele zamadoda kunye neenwele eziza kugquma indawo yoboya kunye nebunzi.
Ukuhlaziya iinwele vs Incopho yomhlolokazi
Zininzi iindidi zeenqwelo moya, kwaye ukwazi umahluko phakathi kwentloko ecekethekileyo kunye nencopho yomhlolokazi kunokukunceda ufumane isisombululo esifanelekileyo. Kubaqalayo, umahluko ophambili kukuba incopho yomhlolokazi luphawu lofuzo, ngelixa ukubola kweenwele kusisiphumo sokucheba kunye nokulahleka kweenwele.
Ngokwendalo ukucheba kweenwele kunye neendawo ezinempandla zinokulungiswa kunye neemveliso zokulahleka kweenwele ezikhuthaza ukubuyela kwakhona kunye nokwanda koxinano. Imveliso yokukhula kweenwele ayinakulungisa incopho yomhlolokazi; kukufakelwa iinwele kuphela onokuwusombulula umba.
Ngokufanayo, abafana mabacinge ngendlela yokuphatha iinwele ezivuthiweyo. Incopho yomhlolokazi luthotho lweenwele onalo ubomi bakho bonke kwaye yindlela iinwele zakho ezikhula ngayo entlokweni yakho. Iinwele ezivuthiweyo zenzeka xa iinwele zakho ziqala ukutyhalela emva njengoko uneminyaka yobudala. Amadoda amadala aphuhlisa uboya obenziwe nge-v njengenxalenye yenkqubo yokuguga yendalo kufuneka aqale ukusika kunye nokwenza isitayile iinwele ngokwahlukileyo ukugubungela ukubala.
Uyilungisa njani incopho yomhlolokazi
Ukulungiswa kwencopho yomhlolokazi kunokwenzeka kuphela ngotyando okanye ukufakelwa iinwele. Iindaba ezimnandi zezokuba zininzi iinwele ezintle zamadoda aneencopho zomhlolokazi ezinokugubungela kwaye zifihle uboya obunemibala u-v. Njengamaxesha onke, ukukhetha ukusika okulungele uhlobo lweenwele zakho kunye nobume bobuso kuya kuthatha ugxininiso kude nendawo. Abanye abantu bayacheba iintloko ukuze bayisuse ngokupheleleyo, ngelixa abanye bezama ukusika i-buzz okanye ukusika abasebenzi ukunciphisa umahluko.
Uninzi lweengcali zesitayile ziyavuma ukuba kububulumko ukufumana isinwele esithandwayo esisebenza kunye nencopho yomhlolokazi wakho. Nokuba ukhetha isitayile ikama lanamhlanje ngaphezulu, umphetho, ukubuyela umva, okanye iinwele ezimdaka, konke okufuneka ukwenze kukuthatha kuluhlu lwethu lweyona ndawo iphambili yomhlolokazi.
Eyona ndlela iphambili yomhlolokazi weeNwele
Ukusika abasebenzi kunceda ukuguqula ubume be-V emacaleni entloko yakho kuba mfutshane kwaye umda umahluko. Ngapha koko, ukusikwa kuhlala kubhalwe isitayile ukuze i-fringe ihlale phezulu ngelixa ezinye iinwele zityhalelwa phambili, zisenza kube luncedo ekugubungeleni izikhewu kwizinwele zakho. Kwinguqulelo yanamhlanje, amacala kufuneka abe mfutshane kwaye acofwe phakathi ukuya ezantsi entlokweni yakho ukuze unikeze umahluko ocekeceke ojijeke kakuhle kwiklasikhi.
iinwele ezigobileyo zamakhwenkwe
Ukusikwa kwe-buzz kususa uninzi lweenwele zakho ukuze incopho yomhlolokazi ingabonakali. Ungakhathazeki ukuba awukulungelanga ukuya kukhangela okuchetyiweyo ngokupheleleyo ngenxa yokuba ukusikwa kwe-buzz kushiya ukukhula ngaphezulu. Nangona kunjalo, ubude kufuneka bube bufutshane kwaye bufanane kuyo yonke indawo ukuze uthathe ingqalelo kude noboya bakho. Ukhetho lobudoda lubandakanya ukukhula kweendevu ezishinyeneyo okanye iinwele zobuso ukongeza ivolumu kwaye uzobe amehlo abantu.
Iinwele ezinde lukhetho olukoyikisayo olunceda ukufihla isiqingatha sencopho yakho ngokutshayela imisonto ecaleni kwaye uyinxibe phantsi kwegxalaba nasemqolo. Iyavula icala elichasene ne-V yakho, kodwa eli lithuba lokubonisa ukumila kobuso bakho kunye nezinto ezintle.
Uninzi lwamadoda lukhetha iinwele ezimfutshane xa ukhetha iinwele ezithandwayo zomhlolokazi. Izinwele ezimfutshane zilula ukuzifumana, ulondolozo olusezantsi kwisitayile, kwaye ujongeka ngathi uyathandeka kwindalo iphela. Xa ukhetha iinwele ezimfutshane zamadoda ezipholileyo, uninzi lwabafana lukhetha ukufumana ukubuna, ukusika okanye ukucheba amacala okusikwa kwamadoda emacaleni nasemva.
Ngokufutshane amacala, mfutshane ungalinciphisa phezulu. Ukusuka kwi-quiff ukuya kwikama ngaphezulu, zonke iintlobo zeenwele zingasebenza ngentloko yomhlolokazi xa iinwele zakho zikucheba ukuze zilingane ubuso bakho kunye nesimbo.
Ukuphela kunokuba yinto ehambelanayo kunye neyanamhlanje kwiinkoliso ezininzi zeenwele zomhlolokazi. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokuphela kokufumana, kodwa eyona inwele iphelileyo yokucheba iinwele ihlala iphakathi ukuya kulusu oluphezulu. Ngokusika amacala kwaye ubuye umfutshane kakhulu, abafana banokuwunciphisa umahluko phakathi kwamacala nangaphezulu.
Ukudityaniswa nobude obuphakathi kunye neenwele ezinde ngaphezulu ezigubungela ibunzi kwaye zifihla incopho yomhlolokazi, ngokufanelekileyo utsala ingqalelo ngelixa ufihla inwele zakho. I-taper fade ingaba phezulu, phakathi okanye ephantsi kuxhomekeke kwizinwele zakho kwaye ujonge, ke thetha nomchebi wakho malunga nokusika okuhle kuwe.
Izinwele ezihlikiweyo zangasemva zamadoda aneenqwelomoya ezimise okwe-v ayisiyiyo eyentliziyo etyhafileyo. Uya kudinga isimo sengqondo esinokukwenza, ubuninzi bokuzithemba kunye nokusikwa okufanelekileyo. Qala nge-fade okanye i-undercut emacaleni nasemva kokucheba okunesitayile. Njengosaziwayo abadumileyo abanencopho yomhlolokazi, kuya kufuneka uthambise iinwele zakho ukuze wamkele iinwele zakho ezihlayo kwaye wamkele ukubonakala kweklasi kunye nobuhle.
Sebenzisa ukukhanya ukuya kumbindi wokubamba pomade kwaye uyihlanganise kakuhle ukuze ufezekise isitayile somfanekiso oyintandokazi kwiibhanki zaseWall Street. Khulisa intshebe kwaye unxibe le iinwele zobudoda ngesitayile.
Icandelo lokucheba iinxalenye
Icandelo leenwele ezisecaleni libandakanya ukubeka indawo ngokuhambelana neenwele zakho. Ngokwenza oku, ungahambisa iinwele kwelinye icala ukuze incopho yomhlolokazi wakho ibonakale ingabonakali. Abafana abanomphetho ongqindilili kufuneka basebenzise i-wax kunye nekama ukuyibrasha kwaye ibuye umva ukuze ingakhiwa kwakhona. Oku kuyakwenza ukuba ukwazi ukwenza isitayile esilinganiselweyo nesichubekileyo.
Uhlobo olufutshane lwe-Spiky Hairstyle
I-spikes ezimfutshane ziya kubamba kwangoko ingqalelo yabantu njengoko zingqale ngqo kumgca-wamehlo. Kwakhona, i-spikes ezibukhali zibonelela ngobuninzi bokubumba kunye nevolumu ukuba incopho yomhlolokazi wakho iya ikhula. Shiya iinwele ngaphezulu ixesha elide kwaye usike amacala asezantsi ukuya kubungakanani nge-fade ephakathi okanye ngaphantsi. Emva koko, i-wax ebambe kancinci okanye ijeli kufuneka incede iinwele zakho zincamathele, zigqamisa ukhetho lwakho lwesibindi.
I-undercut edityaniswe nencopho yomhlolokazi ikunika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo. Ngokwesiqhelo, ubume be-V buthetha ukuba ufuna iinwele zakho zibonakale zigcwele, oko kuthetha ukuba indlela emfutshane egqwesileyo ilungile. Udinga iinwele ukuba zihlale emva kwesiphumo sokugqibela, ke kuya kufuneka uthathele ingqalelo i-quiff okanye isitayile esitshayele ngaphambili. Olunye ukhetho lokongeza ivolumu kukushiya iinwele zakho zimanzi kancinci emva kokuhlamba kwaye uzomise ngokomgangatho ngodongwe lwesitayile kunye nebrashi ejikeleziweyo. Ungayisebenzisa imveliso ngeminwe yakho ukugxininisa ubume bendalo beenwele zakho ukuba unee curls okanye iikinks.
I-haircut ye-taper sisikere esishiya umva kunye namacala amade kunokuba siphele. Inkangeleko yeyesiko kwaye icocekile, kwaye isebenza kakuhle neenwele ezinde ngaphezulu ezihambayo. Ngamacala atyhidiweyo, cela umchebi wakho ukuba anciphise ubude beenwele zakho ngezikere okanye ukusika i # 8 ngeeklipa. Ubude obongezelelekileyo buza kunika iinwele zakho imbonakalo ejiyileyo kwaye uzive, kwaye zilungele ukwenza isitayile solusu olude. Iinwele ezingaphezulu kufuneka zikhangeleke ngakumbi, ngakumbi ukuba i-taper iphantsi, kwaye ungatyhala iinwele zangaphambili zibuyele ekukhuliseni ubhuti okhumbuza uChris Hemsworth okanye uBradley Cooper.
Uhlobo lweenwele olugobileyo kukusikwa kokuqala kolu luhlu olusebenzayo ngokusebenzisa ubume bendalo kunye nobunzima bokutshixa ukulinganisa incopho yomhlolokazi. Kungenxa yokuba iinwele ezijijekileyo ezimfutshane kunye neziphakathi zinzima, zivumela ii-tresses ukuba ziwe ngaphambili. Ungasebenzisa i-wax ukwenza isitayile esimdaka se-chic esibonakala sipholile kwaye siqhelekile ngaphandle kokuphazanyiswa.
I-pompadour yenye yeenwele ezimbalwa ezisebenza kunye nencopho yomhlolokazi njengoko kunqunyulwe iinwele ezinde kwaye ngokwentelekiso kufakwa phambili kwaye kuye kunyusa umthamo nokuzala. Ukuhamba ngobuchule kukubrasha ipompadour phezulu kunokuba ubuye umva njengoko oku kukuvumela ukuba usebenzise ubude ukuthatha ugxininiso kumgangatho weenwele ezimile ngo-V. Ngokwahlukileyo okwahlukileyo, unokuyidibanisa nefadayi ecocekileyo. Ukuba ukhetha okokugqibela, kuya kufuneka utyibilike okanye utshayele iinwele zakho ngasemva ukuze ziqine kwaye zinzima.
Amadoda aneenwele ezi-wavy zinobungqingili obukhethekileyo ekufuneka bezisebenzisile kwisitayile esibonakalayo esipholileyo esiya kuphazamisa incopho yomhlolokazi wabo. Nokuba uhlamba iinwele zakho emva okanye udibanisa iinwele zakho ezi-wavy ecaleni, uya kufezekisa i-hairstyle entle entle eya kutsala ingqalelo kude nentloko yakho. Ukuba uneenwele ezijiyileyo ze-wavy, sebenzisa ipomade eyomeleleyo ukulawula kunye nesitayile. Ngaphandle koko, imveliso yokuhombisa iinwele ilungele ukufumana amaza ngokuhamba. Ekugqibeleni, mfutshane ukuya kubude obuphakathi ubude bokunqunyulwa kweenwele kunokuba kwi-point kunye nakwimfashini ukuba usebenzisa uhlobo lweenwele zakho ukwenza ivolumu kunye nokuzala.
Indlela emfutshane yokuPhambili
Isityalo esinciphileyo siphela ngomphetho sisitayile esifutshane esiphambili esisebenza kakuhle kumadoda aneenqwelo moya ezihlaziyayo. Unokushiya ukukhula okungaphezulu ngaphezulu, ngasemva, kunye nasemacaleni, kodwa icandelo eliphambili leenwele zakho kufuneka lidityaniswe phambili ukufihla amabala anempandla. Ukunqumlela phambili okumfutshane kubukhali ngendlela emangalisayo kwaye yindlela emnandi yokulahleka kweenwele zakho ngobabalo.
Umphetho osongwayo udibanisa ezona ndlela zingcono. Umphetho yinto egqibeleleyo kwincopho yomhlolokazi kuba ifihla ukuphakama kwentloko yakho, ngelixa ii-curls ezixineneyo ngokwendalo ziwela ngaphambili, zongeza kwi-camouflage. I-twist yanamhlanje ibandakanya ukuphela okuphezulu okubukhali emacaleni okuya kuncedisa iinwele zakho ezigobileyo. Jonga zonke iintlobo ezahlukeneyo zeenwele ezigobileyo ukuze ufumane iindlela ezipholileyo zokucheba iinwele onokufuna ukuzilinga.
Ukuhamba kwe-bro kusebenza kakuhle kumadoda aneenwele eziphakathi-ubude ukutsala ukugxila. Yidibanise kwakhona ukwenza ukujonga okungazamiyo okwenza ukuba iinwele zakho eziphakamileyo zingabonakali. Ungasizama isitayile ngeenwele ezinde, nazo, kodwa ke ulumke ungonakalisi ibhalansi ngokuzigqogqa ngasemva.
Hlanganisa kwakhona neendevu
Ukusika umva okucekeceke ngentshebe kukhetho olunye lokususa ukugxila kwincopho yomhlolokazi wakho. Kuhle kakhulu zonke iinwele ezimfutshane ezidityaniswa neenwele zobuso kwiziphumo ezimnandi.
Incopho yeNwele yomhlolokazi
Qala ngenwele efipheleyo okanye unqumle ngasemva nasemacaleni ukufezekisa ukubonakala kwesitayile.
Ukuba ufuna iinwele ezimfutshane, cela i-barber yakho ukuba ibe nebala eliphakamileyo eliwela eluswini.
Ubude obuphakathi kunye neenwele ezinde zinokufihla incopho yomhlolokazi.
Ukuba unayo incinci encinci, fumana i-buzz cut okanye i-crew cut kwaye uthethe nomchebi wakho malunga nokulungisa i-hairline ngokuyicheba.
Ukuba unencopho yomhlolokazi onzulu, gcina iinwele zakho ixesha elide kwaye uzikame phambili ukwenza umphetho.
Ezona zinwele zilungileyo zokucheba iinwele okanye incopho yomhlolokazi ixhomekeke kwindlela ofuna ukuyilungisa ngayo iinwele zakho.
Khulisa intshebe xa ufuna ukutsala umdla.
Sebenzisa iimveliso zeenwele ze-matte ukunika iinwele zakho ivolumu engaphezulu kunye nefuthe lokuqina.
zithini iimpawu zam zokuvumisa ngeenkwenkwezi
indlela yokwenza iinwele ezigobileyo amadoda
Uyilo lweenwele kumakhwenkwe
indoda tattoo engalweni
ifashoni yeenwele zomntu
Izitayela zeenwele ze-justin bieber